Abwaan Xasan-Ganey oo ka hadlay Warar been ah oo laga baahiyay Abwaanno uu ka mid yahay | Somaliland.Org
February 25, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Abwaan Xasan X. Cabdilaahi (Xasan-Ganey) oo ka mid ah Hal-abuurada Soomaalida, ayaa been-abuur ku tilmaamay warar ka dhan ahaa sababta ay uga baaqdeen kulan toddobaadkii hore lagaga dhawaaqayay sabad loogu magac-daray Abwaan Hadraawi oo lagu baahiyay mid ka mid ah Wargeysyada dalka.
Abwaanka oo daba socday war uu daabacay wargeyska Yool cadadkiisii 21 February 2010 soo baxay oo si ba’an loogu naqdiyey xafladda abwaan Hadraawi, isla markaana lagu sheegay in hal-abuurrada Xasan Ganay, Maxamed Xaashi Dhamac (Gaarriye) iyo Cali Xasan Aadan (Banfas) uga muquurteen ka qaybgalka munaasibaddaas arrimo la xidhiidha barnaamijka oo beelaysnaa awgeed, waxa uu arrintaas ku tilmaamay been-abuur cad oo aanay garanayn meel wargeysku ka keenay.
Qoraal beenin ah oo abwaan Xasan X. Cabdillaahi (Ganay) arrintaa ka soo saaray, ayaa wuxuu u dhignaa sidan;
“Anigoo tixraacaya war uu daabacay wargeyska Yool, cadadkiisii soo baxay 21 February 2010 ee ku saabsanaa xaflad lagu qabtay hoteelka Maansoor, isla habeenkaas oo wargeyska lagu naqdiyey magaca loo bixiyey oo la siiyey abwaan Hadraawi. Waxa maqaalkaas lagu xusay in aniga [abwaan Xasan Ganay], abwaan Maxamed Xaashi Dhammac (Gaarriye) iyo abwaan Cali Xasan Aadan (Banfas) aannu uga maqnaanay madasha barnaamijkaas oo beelaysnaa darteed. Haddaba, waxaan halka ku caddaynaynaa in warkaasi yahay been-abuur cad, isla markaana aanaan garanayn meel uu warkaas ka helay qoraagu, runtuna waxay tahay anigu haddaan ahay Xasan-Ganey hawl aan ka soo bixi kari waayey darteed aan uga cudurdaartay ka qaybgalka xafladda, kagana sheegay madasha. Abwaan Gaarriye isugu habeenkaas kamuu warqabin, siduu ii sheegay, Abwaan Cali-na (Cali-Banfas) waa nin buka oo la ogyhay, aniga oo bulshada ka codsanaya in Illaahay caafimaad u weydiiyaan. Sidaa darteed, waxaannu kula talinaynaa wargeyska Yool inuu iska hubiyo waxa uu qorayo.”
Previous PostGuddiyo ka tirsan Golaha Guurtida oo maanta doortay hoggaan cusubNext PostGuddida Doorashada oo keenay Kaadhadh cusub oo Doorashada lagu galayo iyo Jawaabta Mucaaradka	Blog